नेपाली जनसम्पर्क समिति क्विन्सल्याण्डको अध्यक्षमा आचार्य
काठमाडौँ । नेपाली जनसम्पर्क समिति क्विन्सल्याण्डको अध्यक्ष पदमा विनोदभक्त आचार्य सर्वसम्मत चयन भएका छन् । बुधबार साँझ ब्रिसबेनमा सम्पन्न अधिवेशनबाट आचार्य नेतृत्वमा आएका हुन् । विस्तृतमा
कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म अष्ट्रेलियामा ८३७ जनाको मृत्यु
एनएसडब्लुमा थप ७ जनामा कोरोना पुष्टि
अष्ट्रेलियामा हत्या भएका गौतमको शव नेपाल पठाउन पहल
सिड्नी । एनआरएनए अष्ट्रेलियाले नेतृत्वमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीस्थित ग्रानभिलमा केही दिन अगाडि आफ्नै श्रीमतीबाट हत्या भएका ३४ वर्षिय सन्तोष गौतमको शव नेपाल पठाउनका लागि अर्थ संकलन अभियान शुरु गरिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा एक नेपाली युवाले पुर्वप्रेमिकालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेपछि...
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा एक युवाले आवेगमा आउँदा कानुनी फन्दामा परेका छन् । आफ्नी पुर्व प्रेमिकाको सम्बन्धलाई लिएर आवेगमा होस गुमाएका एक २५ वर्षीय नेपाली युवा एडिलेडमा पक्राउ परेका छन् । पूर्वप्रेमिकालाई धम्की दिनुका साथ ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा उनी पक्राउ गरेका हुन् ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा बिजुली सेवा अवरुद्ध
सिड्नी । आँधीबेहरीको कारण सिड्नीमा विजुली सेवा अवरुद्ध भएको छ । आँधीको कारण विजुलीका पोल तथा रुख ढल्दा उक्त सेवा अवरुद्ध भएको हो । हाल १६ हजार भन्दा बढी आवास क्षेत्रमा विजुली सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
अष्ट्रेलियामा नेपाली श्रीमान हत्याकाण्डः यसकारण डर र चिन्तामा थिए दम्पत्ती ?
मेलवर्न । सिड्नीको ग्रान्भिलमा बसोबास गरिरहेका एक नेपाली दम्पत्तीबीच झगडा हुँदा रुपन्देहीका सन्तोष गौतमको अष्ट्रेलियामा ज्यान गएको छ । ३४ वर्षे सन्तोषलाई गहिरो चोट लागेको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
को हुन् अष्ट्रेलियामा आफ्नै श्रीमतीबाट हत्या भएका नेपाली व्यक्ति ?
अष्ट्रेलियामा नेपाली श्रीमान श्रीमतीबीच कुटाकुट, श्रीमानको ज्यान गयो
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा श्रीमान श्रीमतीबीच भएको झगडामा कुटाकुट हुदाँ श्रीमानको मृत्यु भएको छ । उक्त घटना लगत्तै प्रहरीले श्रीमतीलाई पक्राउ गरेको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार श्रीमतीले धारिलो हतियारले श्रीमानलाई प्रहार गरेकी थिइन् ।
सिड्नीः सपनाको सहर
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाको दक्षिणी उत्तर कोस्टमा सिड्नी अवस्थित रहेको छ ।
अष्ट्रेलियन अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् : दिसा–पिसाबबाट थाहा हुन्छ तपाईको कमाई कति ?
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाको क्विन्स्ल्यान्ड युनिभर्सिटीले एक अनुसन्धानमा जिकिर गरेको छ की मानिसको दिसा–पिसाबबाट पत्ता लाग्न सक्छ की कुनैपनि व्यक्ति कति कमाउँछ ।
अष्ट्रेलियामा लागेको डरलाग्दो डढेलो अझै नियन्त्रणबाहिर ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको विभिन्न जंगलमा लागेको आगो हालसम्ममा पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सिड्नी सहरमा यसको प्रभाव देखिएको छ । धुँवाका कारण व्यस्त सहरहरुमा समस्या भएको बताइएको छ ।